Nin maanta mindi ku weeraray safaarada Mareykanka ee magaalada Nairobi oo la dilay (SAWIRO+VIDEO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Nin maanta mindi ku weeraray safaarada Mareykanka ee magaalada Nairobi oo la dilay (SAWIRO+VIDEO)
Waxaa manata magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya, gaar ahaan ilinka hore ee laga soo galo safaarada Mareykanka lagu toogtay nin ku hubeysnaa mindi, islamarkaana damacsanaa inuu si xoog ah ku galo safaarada.
Ninkaas oo Somali-Kenyan ah ayaa deegaan ahaan kasoo jeeda degmada Wajeer ee Waqooyi bari Kenya, waxaana la sheegay inuu mindi ku weeraray mid ka mid ah askartii ilaalada ka ahayd safaarada Mareykanka, isagoona kadib mindida ku dhaawacay.
Askariga dhaawacmay ayaa la sheegay inuu ishor-taag ku sameeyay ninkaasi inuu gudaha safaarada galo, kadibne uu dhaawac kasoo gaaray mindida ninka ku weeraray.
Ciidanka booliska Kenya ee ku sugnaa safaarada ayaa markii dambe ninkaasi toogasho ku dilay, waxaana la sheegay in ninkaasi uu doonayay inuu safaaradda xoog ku galo, balse aan la ogeyn uljeedadiisa kale uu damacsanaa.
Ilaa iyo haatan lama oga uljeedka ninkaasi uu kalahaa safaaradda, balse saraakiisha FBI-da oo goobta gaartay ayaa ka qaaday dhiig iyo calaamado kale oo baaritaan dheeraad ah ay ku sameeyaan, waxaana la sheegay inuusan wadan wax teleefoon ah, laakiin laga helay Sim Card-ka loo isticmaalo teleefanada gacanta.
Dhinaca kale, masuuliyiinta ku sugan safaarada Mareykanka ee magaalada Nairobi ayaa xaqiijiyay in weerarkaasi aanay waxyeelo kasoo gaarin shaqaalahooda, marka laga reebo ninka askariga ah oo mindida lagu dhaawacay.
Ugu dambeyntii, ciidanka booliska Kenya iyo kuwa FBI-da Mareykanka ayaa bilaabay baaritaano dheeraad ah oo ay ku ogaanayaan sababta keentay in ninkaasi uu weerar kusoo qaado safaarada.